Khabiirka Dijital ah
Liisaska shaqooyinka ugu baahida badan ee 2021 waa kuwo iswaafaqsan ilo badan. Waxaad had iyo jeer heli doontaa shaqooyinka sida soo saaraha webka, falanqeeyaha amniga macluumaadka, softiweerka softiweerka, iyo farsamayaqaannada farsamada casriga ah ee ku qoran 10ka sare ama 20ka sare ee ugu koritaanka badan ama baahida loo qabo.
Haddii aad xiiseyneyso sahaminta ama aad diyaar u tahay inaad shaqo ka raacdo warshadaha tiknoolajiyada, halkan waxaa ku yaal xulashooyin dhakhso leh oo kaa caawinaya inaad ka gudubto ama aad garoonka gasho.
Barnaamijka barashada daahfurka ee LaunchCode wuxuu bixiyaa fursad bilaash ah, oo aan lahayn xarig ku-xirnaan si loo bilaabo xirfad ku saabsan teknolojiyada. Ku buuxi barnaamijka heerka hordhaca ah si aad u hesho tixgelinta arjiga mudnaanta u leh LC101.
Maktabadda Dadweynaha ee Magaalada Kansas waxay leedahay Tabaruceyaal LaunchCode Discovery Discovery oo diyaar u ah inay kugula taliyaan inta aad koorsada socoto.
Ku kori Google
Waxaa laga yaabaa inaad noqon karto Googler-ka soo socda! Ka fiiri fursadahaan bilaashka ah si aad u barato xirfadaha farsamada cusub adoo u maraya tababar heer xirfadeed Google Koorsooyinka badankood waxay bixiyaan shahaado xirfadeed si ay kuugu muujiyaan inaad heerkaaga xirfad u leedahay shaqo-bixiyeyaasha.